Tetikasa ho an’ny fahasalamam-bahoaka amin’ny fampiasana ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra mba hanamafisana ny feon’ny vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Tetikasa ho an'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fampiasana ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra mba hanamafisana ny feon'ny vondrom-piarahamonina
Voadika ny 20 Desambra 2018 9:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, Español, বাংলা, English
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nivoaka voalohany tao amin'ny Rising Voices .
Ny Rising Voices sy ny Hetsiky ny Fampahalalam-baovaon'olon-tsotra momba ny Fahasalamana Open Society Institute dia faly manambara ny tetikasa fanentanan'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra mifantoka amin'ny fahasalamana miisa enina vaovao indrindra. Naharay soso-kevitra mihoatra ny 110 avy amin'ireo mpikatroky ny fahasalamana sy ireo fikambanana miorina any amin'ny firenena miisa 50 mahery izahay. Miavaka amin'ireo teknolojia vaovao indrindra ampiasain'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra toy ny bilaogy, rakipeo ary ny lahatsary an-tserasera mba hanampiana ny tanjona ho amin'ny fiarovana ny fikambanana misahana ny fahasalamam-bahoaka, ary hanomezana hery ny vondrom-piarahamonina izay miara-miasa aminy ireo voafidy hahazo fanohanana miisa enina.
Ao Brasov, Romania, hampiofana infirmiera, dokotera ary mpiasa ao aminy ny foibem-pitsaboana Casa Sperantei ny amin'ny fomba fampiasana fitaovana fandraisam-peo sy lahatsary mba hizarana ny tantara mivantana momba ireo mararin'ny aretina sy atahorana ny ainy. Hanararaotin'ny ekipan'ny foibe ihany koa ny fanazarana media an-tserasera sy ny tranonkalany azo andefasan-kafatra hanazavàna ireo tanjona, fahombiazana ary fanamby amin'ny fampitoniana ny aretina, izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny fitsaboana ala-nenina ho an'ireo marary sy ny fianakaviany, mifantoka manokana amin'ny mponina marefo, anisan'izany ireo zokiolona, ​​ankizy ary mararin'ny homamiadana na ny VIH/SIDA.
Ao amin'ny tanànan'i Kwa Mashu, any ambanivohitr'i Durban, Afrika Atsimo, hampiasa ny Laboratoara Faminavinana Ekhaya ny tetikasa Kwa Mashu Community Advancement Project (K-CAP) mba hampiofanana ireo mpanao gazety olon-tsotra miisa 20 vaovao avy ao an-tanàna momba ny fitateram-baovao ao an-toerana izay mifandraika amin'ny olana ara-pahasalamana miantraika amin'ny fiarahamonina. Tamin'ny taona 1998, notoraham-bato ho faty i Gugu Dlamini tao Kwa Mashu taorian'ny fanambarana ampahibemaso nataony fa mitondra ny tsimokaretina VIH izy. Mikasa ny hanohitra ny fanilikilihana mahery vaika toy izany vokatry ny VIH sy ny SIDA ireo mpanao gazety olon-tsotra miisa 20 hofanina ao amin'ny K-CAP, sady mitondra ihany koa ireo olana ara-pahasalamana ho henon'ny vahoaka iraisampirenena.
Hampiasa bilaogin-dahatsoratra, sary, rakipeo, ary lahatsary an-tserasera mba hizarana ny traikefany eo anivon'ny foibe fitsaboana ny mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina any Kyiv, Okraina i Pavel Kutsev ao amin'ny Drop-in Center. Hanokatra varavarankely hijerena ny zava-misy isan'andro amin'ny mpidoroka zava-mahadomelina ny bilaogy ary hamaritra ny fiantraikan'izany toe-javatra izany eo amin'ny fahasalamam-bahoaka manerana ny firenena.
Hanangana fikambanana famahanana bilaogy ho an'ireo mpikarakara ny fahasalaman'ny marary saina izay manofana azy ireo amin'ny fitantanana tranonkala sy bilaogy, mandefa lahatsary an-tserasera any amin'ny tranonkala fifampizarana ary mampiasa ny tambajotra sosialy ny Orina Mpanasoa Orizonturi ao amin'ny Campulung Moldovenesc , Romania. Ahafahan'ireo mpandray anjara mizara ny tantarany manokana sy ananganany ny mari-panondroana azy ireo an-tserasera ny fahaiza-manao ara-teknika .
Ao Brazzaville, Congo, “hampiofana ireo tompon'andraikitry ny serasera ao amin'ny fikambanana SIDA ao an-toerana ny fikambanana AZUR Fampandrosoana, izay tafiditra ao anatin'ny hetsika Tambajotran'ny SIDA Afrika, ary amin'ny alàlan'ny fitantarana tantara amin'ny sehatra nomerika, ny rakipeo, ary ny famoronana bilaogy mba hanaovana fanadihadiana momba ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ny olona voan'ny aretina VIH Sida any Congo sy mba hampiasana izany ho toy ny fitaovana ho amin'ny fiarovana, fanabeazana ary ho amin'ny fampiroboroboana ny zon'ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH.” Hofaritan'ny tompon'andraikitry ny serasera tsirairay avy ny fomba fiantraikan'ny valan'aretina SIDA amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana izay iasan'izy ireo ary hofaritany ihany koa ny endriky ny fiainana andavanandron'ny olona mitondra VIH Sida.
Farany, saingy tsy ny kely indrindra, hampiasa ny fampitam-baovaon'olon-tsotra mba hanamorana ny fahazoan'ny olona mitondra VIH, SIDA, hepatita, ary TB fitsaboana any amin'ny faritra miisa 20 manerana an'i Rosia ny tetikasa FrontAIDS any St. Petersburg, Rosia. Ho lasa fanangonam-baovao sy foibe loharanom-baovao avy amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra mifandraika amin'ny olana ara-pahasalamana manodidina an'i Rosia ny tranonkalan'ny bilaogy ifandraisana.
Samy manana ny hanitra ho azy amin'ny lafiny ara-jeôgrafia sy amin'ny fomba fiasany ireo tetikasa miisa enina, saingy samy mizara ny fikasany hampiofana ireo mpikatroka ara-pahasalamana amin'ny fampiasana media vaovao izy ireo mba hampielezana ny fanairana ny saina momba ny asany sy ny vondrom-piarahamonina izay sahaniny.